Ahoana ny fomba fanaovana GIF Animated ho an'ny fanentanana marketing amin'ny mailaka manaraka mampiasa Photoshop | Martech Zone
Ahoana ny fomba fanaovana GIF Animated ho an'ny fanentanana marketing amin'ny mailaka manaraka mampiasa Photoshop
Zoma Janoary 28, 2022 Zoma Janoary 28, 2022 Douglas Karr
Manana fotoana mahafinaritra izahay miara-miasa amin'ny mpanjifa lehibe Closet52, an fivarotana akanjo an-tserasera izay nosoniavinay sy natsanganay hatrany am-boalohany ho an'ny orinasa lamaody malaza sy malaza any New York. Ny fitarihan'izy ireo dia miara-miasa aminay hatrany amin'ny hevitra iarahana amin'ny fampielezan-kevitra na paikady manaraka izay hotanterahinay. Ao anatin'ny fampiharana azy ireo dia naparitaka izahay Klaviyo ho an'ny ShopifyPlus. Klaviyo dia sehatra automation ara-barotra malaza miaraka amin'ny fampidirana mafy amin'ny Shopify ary koa ny Shopify Apps maro.
Ny endri-javatra tiako indrindra dia ny azy ireo A / B fitiliana any Klaviyo. Azonao atao ny mamolavola dikan-teny isan-karazany amin'ny mailaka, ary handefa santionany i Klaviyo, miandry valiny, ary avy eo dia alefaso ny dikan-teny mpandresy ho an'ny mpanjifa sisa - ho azy rehetra.
Ny mpanjifanay dia misoratra anarana amin'ny mailaka lamaody ao amin'ny indostria ary nanohy nanamarika ny fankafizan'izy ireo ny mailaka sasany misy sary mihetsika amin'ny vokatra. Nanontany izy ireo raha afaka manao izany izahay ary nanaiky aho ary nanangana fampielezan-kevitra miaraka amin'ny fitsapana A/B izay nandefasanay dikan-teny iray misy sarimiaina misy vokatra 4, ary iray hafa misy sary tokana, tsara tarehy, static. Ny fampielezan-kevitra dia natao ho an'ny fipoahana fivarotana ny akanjony fararano satria mitondra vokatra vaovao izy ireo.
Dikan-teny A: GIF mihetsika
Dikan-teny B: sary static
Ny crédit sary dia mandeha ho an'ireo manan-talenta ao Zeelum.
Mbola mandeha ny santionan'ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao, saingy mazava tsara fa ny mailaka miaraka amin'ny sary mihetsika dia mihoatra lavitra noho ny sary static… 7% ny tahan'ny misokatra… fa mahagaga In-3 ny tahan'ny klioba (FNT)! Heveriko fa ny zava-misy fa ny GIF animated dia nametraka fomba maro samihafa teo anoloan'ny mpanjifa dia nitarika mpitsidika maro kokoa.
Ahoana ny fomba fanaovana GIF Animated amin'ny Photoshop
Tsy karazana pro amin'ny Photoshop aho. Raha ny marina, ny fotoana tokana ampiasaiko matetika Adobe Creative Cloud's Photoshop dia ny hanaisotra ny fiaviana sy ny fametrahana sary, toy ny fametrahana pikantsary eo ambonin'ny solosaina finday na fitaovana finday. Na izany aza, nanao fikarohana an-tserasera aho ary nahita ny fomba fanaovana animation. Ny interface interface ho an'ity dia tsy mora indrindra, fa tao anatin'ny 20 minitra ary rehefa avy namaky fampianarana sasany dia afaka nandondona azy aho.
Manomana ny sary loharano:
Dimensions - Mety ho lehibe tokoa ny GIF misy sary mihetsika, noho izany dia nataoko antoka ny nametrahako ny refin'ny rakitra photoshop mba hifanaraka tsara amin'ny sakan'ny môdely mailaka mirefy 600px.
famatrarana – Ny sary tany am-boalohany dia avo lenta ary avo be ny haben'ny rakitra, noho izany dia novana ny habeny ary nopotehiko Kraken mankany amin'ny JPG misy haben'ny rakitra kely kokoa.
fiovana - Na dia mety halaim-panahy aza ianao hanampy animation tweens (ohatra: fading transition) eo anelanelan'ny frames, izay manampy habe be amin'ny rakitrao ka tsy hanao izany aho.
Mba hamoronana sary mihetsika amin'ny Photoshop:
Mamorona rakitra vaovao miaraka amin'ny refy mifanandrify amin'ny refy apetrakao ao amin'ny maodely mailakao.
Select Window > Timeline mba ahafahana mijery ny timeline eo amin'ny fototry ny Photoshop.
Ampio ny tsirairay sary ho sosona vaovao ao anatin'ny Photoshop.
Tsindrio Mamorona Frame Animaao amin'ny faritra Timeline.
Eo amin'ny ilany havanana amin'ny faritra Timeline, safidio ny sakafo hamburger ary safidio Manaova Frames avy amin'ny Layers.
Ao amin'ny faritra Timeline, azonao atao tariho ho amin'ny filaharana ny frame izay tianao hiseho ireo sary.
Kitiho ny sary tsirairay izay misy 0 seg, ary safidio ny fotoana tianao haseho an'io sary io. nisafidy aho 2.0 segondra isaky ny sary.
Ao amin'ny dropdown eo ambanin'ny frames, safidio mandrakizay mba hiantohana fa mihodina tsy tapaka ny animation.
Tsindrio ny Lalao Button hijerena ny sarimiainao.
Tsindrio File > Export > Save for Web (Lova).
Select GIF avy amin'ny safidy eo an-tampon'ny havia amin'ny efijery Export.
Raha tsy mangarahara ny sarinao dia esory ny marika Transparency safidy.
Tsindrio Save ary manondrana ny rakitrao.
Dia izay! Manana ny GIF mihetsika ianao izao hampidirina amin'ny sehatra mailakao.
Disclosure: Closet52 dia mpanjifan'ny orinasako, Highbridge. Mampiasa rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity aho Adobe, Klaviyo, Kraken, ary Shopify.
Tags: ab testingAdoberahona famoronana adobeadobe photoshopsary mihetsika giftsindrio-amin'ny alalan'ny-tahan'nycloud cloudFNTecommercemailaka ecommercegif animated mailakafampielezana mailakamailaka Marketingfitsapana mailakahighbridgeahoana nony fomba hanaovana gif animatedfamatrarana saryKlaviyokrakenfanentanana ara-barotratahan'ny misokatraPhotoshopphotoshop gifPhotoshop tutorialshopify
Araho ny kitiho Mailto amin'ny hetsika Google Analytics mampiasa Google Tag Manager